Manchester United iyo Sir Alex oo wada qorshe dib loogu soo celinayo Cristiano Ronaldo garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 22 Feb 2018. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxda Manchester United ay ka shaqeyneyso in mar kale ay dib u soo ceshato xidiggeedii hore reer Bortuqiis Cristiano Ronaldo, kaasoo haatan u ciyaara kooxda Juventus.
Naadiga Juventus ayaa Ronaldo xagaagii dhowaa ku soo iibsatay 112 milyan oo Euro, isagoo u saxiixay heshiis afar sanadood ah, isagoo doonayay waqtigaasi in uu bog cusub u furo taariikhda ciyaarihiisa.
Si kastaba ha ahaatee wargeyska ‘Dario Gol’ ayaa maanta oo Jimco ah waxa uu qoray in Manchester United ay wado dhaq dhaqaaq uu hoggaaminayo tababarihii hore ee soo shaac bixiyay Ronaldo ee Manchester United Sir Alex Ferguson.
Ronaldo ayaa jariidaddu sheegeysaa in uusan ku faraxsanayn joogitaankiisa Talyaaniga, iyadoo sidoo kalena ay Juventus halis ugu jirto inay ka harto Koobka Champions League kaddib markii lugtii hore ee 16 dhammaadkii guuldarro 2-0 kala soo kulmeen Atletico Madrid kulankaasoo ka dhacay Spain, waxaana haatan laga doonayaa Juventus inay labadaas gool soo aarto haddii kale way hareysaa.
Dario Gol wuxuu intaa ku darayaa in Ronaldo oo 34 jir ah ay dhici karto in uu ku laabto Old Trafford isla markaana Manchester United ku iibsato 113 milyan oo dollar (87 milyan oo Giniga istarliinka ah).
Qorshaha cusub ee Manchester United ayaa waxaa lala xiriirinayaa in ay xiddigo cusub isha ku hayso kuwaasoo ay ka mid yihiin; sida Kylian Mbappé, Neymar iyo Harry Kane.
RASMI: Isku aadka wareega 16-ka Europe League oo la soo saaray....(Chelsea iyo Arsenal oo la kala leexiyay)